प्रकाश शरण महतले खोले एमसीसीबारेको नयाँ रहस्य, यस्तो रहेछ देउवाको चाल — Imandarmedia.com
प्रकाश शरण महतले खोले एमसीसीबारेको नयाँ रहस्य, यस्तो रहेछ देउवाको चाल
काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले एमसीसीबारे नयाँ रहस्य खोलेका छन् । महतले एमसीसी तत्काल पास नहुने तत्य खोलेका हुन् ।
यनले नेपालमा उठेको आशंकालाई अमेरिकी सरकारले स्पष्ट नपारेसम्म यसको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सहमहामन्त्री महतले नेपाली जनतामाझ उठेका आशंकालाई अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारेपछि मात्रै एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
‘कतिपय विषयहरु यो छ कि उ छ कि भन्ने जुन पब्लिकमा उठेका छन् । त्यसबारेमा पनि क्लेरिफिकेसनको लागि सरकारले पहल गरिराखेको छ । त्यो स्पष्ट क्लेरिफिकेसन आएपछि यसले पनि एउटा ल्याण्डिङ गर्छ भन्नेकुरा मलाइ लाग्दछ’ उनले भने ।
सरकारले एमसीसीका विवादित विषयमा प्रष्ट पार्न भन्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएको छ । महतले अमेरिकी सरकारले प्रष्ट पारेपछि एमसीसीबारेको आशंका निवारण हुने र परियोजना अघि बढ्ने बताए ।
‘पब्लिकमा यस्तो पो छ कि उस्तो पो छ कि भन्ने आशंका छ त्यो आशंका अवश्य पनि निवारण हुने काम सम्बन्धित पक्षबाट हुनेछ र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ’ उनले भने ।
सहमहामन्त्री महतले सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बताए । मन्त्रीको नाम पाउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।
यसै गरि , नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलल एमसीसीको विरुद्धमा ज्यान फालेर लागेका छ । उनको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुर्सी हल्लिएको छ ।
उनले देउवालाई एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अधिकार नरहेको भन्दै तुरुन्तै राजिनामा दिन मागेका छन् । रावलले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा विदेशीले धावा बोल्दा पनि चुप लाग्ने सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
एमाले अछाम–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार बबरमहलको कार्की ब्यांक्वेटमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै रावलले यस्तो बताएका हुन्। ‘दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा तर्दै गरेका जयसिंह धामी बेपत्ता भए तर, सरकारले भारतसँग कुनै कूटनीतिक विरोध पनि जनाउन सकेन’, उनले भने, ‘स्वाधीन देशको सरकारले गर्ने काम यो हुनै सक्दैन।’
सरकारले सात दिनभित्र अनुसन्धान गर्ने भनेर एक महिना लगाएर ल्याएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट विषय नै उल्लेख गर्न नसकेको रावलको भनाइ छ।‘भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले थाहा छैन भन्ने जवाफ दिन्छन्।
अहिले पनि हेर्नुस् दार्चुलामा हेलिकोप्टर उडिरहेको छ। सरकार मौन छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा धावा बोल्दा पनि सरकार चुप लाग्छ। त्यस्तो सरकारले जनताको देशको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन।’
उनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नका लागि घाँटीमा कसले समातेको छ भन्दै प्रश्न गरे। ‘सरकार बन्यो हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलामा जयसिंह धामीले नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिँदा बेपत्ता भए,’ उनले भने, ‘झटट् हेर्दा एकजना व्यक्ति जस्तो लाग्ला तर एउटा व्यक्तिले देशको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ।’
रावलले जो व्यक्ति आफ्नो नागरिक र राष्ट्रको हक अधिकारको र स्वाधिनतामा कसैले आँच पुर्‍याउँदा बोल्न सक्दैन त्यस्तो व्यक्ति सरकार चलाउन मात्रै नभइ नागरिक नै हुन नसक्ने टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घरघरमा पु¥याउन लागेको उनको भनाइ छ । उनले एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन पनि नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरे ।
“झिलिमिली हुन्छ यो देश भनेर जनतालाई भ्रम छरेर नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा पुर्‍याइँदै छ । नेपाललाई पराधीन उपनिवेश बनाउन पाइँदैन भनेर आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुस् । जसरी बेलायतीहरूले भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनी खोले, त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीभन्दा खतरनाक छ एमसीसी,” उनले भने, “जसरी अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अगाडि बढाइयो, आज अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अब यसलाई अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ ।”
एमसीसी सम्झौता असमान भएको र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तानुरूप नभएको उनले उल्लेख गरे । एमसीसीको कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामाथि हमला गर्ने पनि उनले बताए ।
भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवालाई मुड्की बजार्दै भने, ‘मलाई गिरफ्तार गर
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मुट्की बजार्दै एमसीसी पास नगर्न चेतावनी दिएका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा अमेरिकी साहायता परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहे भन्दै मुट्की बजार्दै यसो नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
शनिबार काठमाडौंमा अछाम जिल्लाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरुको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै रावलले एमसीसी इष्ट इन्डीया कम्पनी भन्दा पनि खतरनाक भएको दावी गरे। ‘झिलिमिली हुन्छ यो देश भनेर जनतालाई भ्रम छरेर नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा पुर्‍याइदैछ,’ रावलले भने, ‘नेपाललाई पराधिन, उपनिवेश बनाउन पाइँदैन भनेर आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुस् ।’
रेडियो र टेलिभिजनबाट विज्ञापन बजाएर राष्ट्रकै अपमान गरिएको उनको भनाइ छ। ‘रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट एमसीसीको बारेमा विज्ञापन बजिरहेको छ,’ रावलले भने, ‘कुनै देशले दिने अनुदान सहयोगको बारेमा अर्को देशले झ्याली पिटेर विज्ञापन गर्छ कहीँ ?’ उनले भने ।
‘यस्तो दुनियाँमा कतै सुन्नुभा’छ ? यो भन्दा राष्ट्रको अपमान के हुनसक्छ ? भर्खरै एउटा टेलिभिजनबाट त्यो बजाएको रहेछ । धेरै विरोध गरेपछि त्यो बन्द भयो । तर रेडियोबाट बजाउने क्रम जारी छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे जेल चलान गर्ने भनि सूचना जारी गरेको आरोप लगाउँदै उनले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेको आधारमा पक्राउ गर्न चुनौती पनि दिए ।
रावलको भनाइ छ, ‘यो लोकतन्त्र हो की के तन्त्र हो ? कि शेरबहादुरजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो ? मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन, ५० दिन भैसक्यो लाजपनि मान्नुपर्ने। उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौता बारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ ।’